yekutanga OS 6 inogadziridzwa muna Gumiguru nekuvandudzwa kweAppCenter uye Mail | Linux Addicts
pablinux | 01/11/2021 11:12 | Yakagadziridzwa ku 01/11/2021 11:15 | Noticias
Mukupera kwesvondo rino, pakati pedehenya nemanhanga, Danielle Foré akatiudza nezvenhau dzichangoburwa dzekusvika yekutanga OS 6 wevaNorse. Pakati pekuvandudzwa pane zvishoma zvese, asi mazhinji ane hukama kune imwe yemashandisirwo ayo, seAppCenter, Email kana Mapikicha. Sezvo chiri chimwe chinhu chatinogona kuona neziso rakashama, pamwe chiri kunyanya kushamisa pane zvauya Gumiguru rino ndechekuti rima dingindira rave kuwanikwa kune desktop yese.
El rima theme yedesktop yese parizvino inosarudzika kune vanogadzira; Ivo ndivo vanozofunga kana app yavo yachinja kuita rima mushure mekuita sarudzo muzvirongwa kana kana vakachengeta pendi yeruvara yavakashandisa pakuigadzira. Izvi zvinodaro kudzivirira matambudziko mumashandisirwo asina kuedzwa zvakakwana.
1 Gumiguru anokwirisa ekutanga OS 6
Gumiguru anokwirisa ekutanga OS 6
App Center yakawedzera bhatani rekufambira mberi iro richaonekwa pane bhatani rekuisa, kubvisa kana kugadzirisa maapplication. Bhawa iri rinotsiva iro rakaonekwa rakaparadzana. Kune rimwe divi, ivo vakagadzirisa kumwe kudzokororwa uye kushandisa mamwe machira.
Webhu yave muv40.3, iine magadzirirwo akadai sekugadziridza patsva muDialog Yezvaanofarira iyo ikozvino inosanganisira kutsvaga kana iyo itsva tab bar.
Tsamba yakavandudza runyorwa rwenhaurirano nekuwedzera menyu kune yechipiri kubaya. Nyaya dzakasiyana siyana dzakagadziriswawo.
Mapikicha zvino anotarisa pamufananidzo kana wangovhurwa pachinzvimbo chebhatani rekuchengetedza. Nekune rimwe divi, ivo vakagadzirisa kuparara kungangoitika pakupinza mafoto kana metadata iine ruzivo rwezuva uye nguva isiriyo.
Karenda yakagadzirisa Windows-maitiro enguva muzviitiko zvakawiriraniswa. Vakagadzirisawo ndangariro yadeuka.
Calculator ikozvino inotarisa pane iyo huru mameseji ekuisa pakutanga, saka unogona kutanga kuisa manhamba kunze kwebhokisi. Vakavandudzawo ruzivo rwemahwindo akawanda.
Mafaira akagadzirisa nyaya apo mamwe maodhiyo mafaira aive nechigunwe chaizogara chakagadziriswa zvachose pachinzvimbo chekudzokera kune iyoodhiyo faira icon ivo vasina chivharo art.
Vhidhiyo ikozvino inotsigira-zvigunwe zviviri swiping kumashure uye kodhi yekufambisa yakakwenenzverwa zvakanyanya.
Iwo general tweaks akagadzirisa nyaya dzakawanda dzepamuchinjikwa, izvo zvichaita kuti desktop (Phanteon) ive nyore kuunza kugovera seFedora. Izvi zvakavandudzawo rutsigiro rwemitauro inoshandisa mabhii matatu emitauro makodhi, pakati pezvimwe zvinhu.
Iyo yakasviba theme yeiyo yese yekushandisa system iripo.
Zvimwe zvigadziriso uye zvigadziriso, kusanganisira shanduko dzevagadziri. Runyoro rwakakwana uye rwakadzama.
yekutanga OS 6.0.3 yaive yakaziviswa Mugovera wapfuura, Gumiguru 30, uye munguva pfupi ISO itsva ichavepo yekurodha pane yako website yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » yekutanga OS 6 inogadziridzwa muna Gumiguru nekuvandudzwa kweAppCenter, Email uye Mapikicha, pakati pevamwe